Ngwaahịa ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ya - gallerylọ ọrụ ngwaahịa dị ọnụ ala
Brass bụ alloy nke ọla kọpa na zinc mejupụtara, ọ bụkwa ezigbo ihe maka imepụta akụkụ ndị CNC (gụnyere akụkụ CNC milled).
Aluminium alloy anwụ-mgbatị ngwaahịa na-bụ-eji na ngwá electronic, ụgbọala, Motors, home ngwa na ụfọdụ nkwukọrịta ọrụ. A na-ejikwa ụfọdụ dị elu, nkenke, nkenke siri ike, alloy alloy ngwaahịa na ụlọ ọrụ nwere nnukwu mkpa dị ka nnukwu ụgbọ elu na ụgbọ mmiri. Isi ojiji ka dị n'akụkụ ụfọdụ akụrụngwa.
Brass bụ ọla kọpa alloy na zinc dị ka isi alloy gbakwunyere alloying ọcha. "Red punch" bụ n'ezie usoro ọkụ na-ekpo ọkụ.
E kewara alloys ọla kọpa ụzọ abụọ, ya bụ ọla na ọla. Brass bụ ọla kọpa alloy na zinc dị ka isi alloy gbakwunyere alloying ọcha.
Brass bụ alloy nke ọla kọpa na zinc mejupụtara, ọ bụkwa ezigbo ihe maka imepụta akụkụ ndị eji arụ ọrụ (gụnyere akụkụ ndị abụrụla). Die mgbatị na-abbreviated dị ka ibe ya bụrụ, nke bụ a mgbatị usoro nke wụrụ awụ alloy mmiri mmiri wụsara n'ime a pịa ụlọ, oghere nke a ígwè ebu na-ejupụta na elu na-agba, na alloy mmiri mmiri na-sikwuo ike nrụgide na-etolite a mgbatị. Ouzhan bara uru bụ ịhazi valves ọla kọpa, ya bụ, valvụ nke ọla kọpa, nke bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ. Ningbo, Zhejiang na China bu ụzọ mepụta usoro nrụpụta ihe.
Carbon nchara bu iron-carbon alloy nke nwere carbon nke 0.0218% rue 2.11%. A na-akpọkwa ya carbon steel. Ohaneze, ọ na-enwe obere silicon, manganese, sọlfọ, na site.
Nkedo aluminum alloy akụkụ
Aluminom alloy bụ a na-abụghị ferrous metal bughi ihe. Aluminom alloy nwere obere njupụta mana ọ dịtụ elu, nke dị nso ma ọ bụ karịa nke igwe dị elu. Ọ nwere ezigbo plasticity na enwere ike ịhazi ya na profaịlụ dị iche iche. Ọ nwere arụmọrụ eletriki magburu onwe ya, nrụpụta ọkụ na nguzogide corrosion. A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ na ojiji ya bụ nke abụọ na nchara.
Brass bụ alloy nke ọla kọpa na zinc mejupụtara, ọ bụkwa ezigbo ihe maka imepụta akụkụ ndị eji arụ ọrụ (gụnyere akụkụ ndị abụrụla). Die mgbatị na-abbreviated dị ka ibe ya bụrụ, nke bụ a mgbatị usoro nke wụrụ awụ alloy mmiri mmiri wụsara n'ime a pịa ụlọ, oghere nke a ígwè ebu na-ejupụta na elu na-agba, na alloy mmiri mmiri na-sikwuo ike nrụgide na-etolite a mgbatị.
Ngwongwo plastik gunyere ihe di iche iche kwesiri ekwesi, naịlọn (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP). Mgbe ị na-ahọrọ ihe maka eserese imepụta, a ga-ahọrọ plastik injinia kwesịrị ekwesị dabere na iji gburugburu ebe obibi na ihe ndị dabara adaba nke akụkụ ndị ọrụ CNC.